ပန်ဒိုရာ: နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်က လာတော့မယ်
ဟိုမှာ နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်ကြီး လာနေပြီ
ဘာမှတ်နေသလဲ ဟဲ့.. တဲ့
ညညဆို ထထငိုတဲ့ ကလေးတွေဆို အသံတိတ် ချောက်ချား ပြားပြားဝပ်နေကြပုံ
အဖြစ်မရှိတော့လည်း ဂျလိဂျလိ တိုးတိုးတိတ်တိတ် အံတုံးတုံးကို ဖိကြိတ်နေကြပုံ
အုံးအွမ်အုံးအွမ် ညာသံပေး ရေမရှိတဲ့ချောင်းမှာ အသံကောင်းဟစ်နေကြပုံ
အညောင်းအညာဆန့်သန်းဝေရင်း မျက်တောင်စင်း တရေးနိုးသော် ပြန်အိပ်ပျော်သွားပုံ
ကာလာရောင်စုံသွင်း ဈေးဗန်းကြီးဖြန့်ခင်းထားတဲ့ နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်
၀စ်လစ်စလစ်နဲ့ တခစ်ခစ် ဖျစ်ညှစ်ရယ်မောနေတဲ့ နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်
အို.. ဘာတဲ့တုန်း နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်
နှစ်ထောင် နဲ့ရယ်တဲ့မှ တစ်ဆယ်
အတ္တတွေမြေချခင်း ထုတ်ချင်းပေါက် ရင်ဘတ်တွေ ဖွင့်ထားလိုက်ကြမယ်။
Posted by pandora at 10:02 AM
ငယ်ငယ်ကတော့ ငပျင်းဆိုတော့ ရှေ့ရေးကို သိပ် မစဉ်းစားပါဘူး။ စဉ်းစားမိရင်လည်း 2010 လောက်ဆို smart ဖြစ်နေလောက်ပြီပဲ တွေးမိမလား မသိ။ ခုတော့လည်း ငချွတ် ပဲ ဖြစ်နေတုန်းပါလားနော်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တရားကျ လိုက်တာ။
Anyway Merry Christmas !
၂၀၀၉ မှာ အိပ်ရေးမဝသေးတာတွေ အပြီးဆပ်ခဲ့ချင်လို့...:D
မပန် ကဗျာလေး မိုက်၏
ခုမှ တခေါက်ပြန်လာရင်း ပုံကို သေချာ ကြည့်မိတယ်။ နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ် ဆိုတာ ဂျို (ချို) နဲ့လား၊ မပန်။
ပန်ဒိုရာရဲ့ နှစ်ထောင့်တဆယ်ကို ဖတ်ပြီး လန့်လိုက်တာ။ ပုံကလည်း ဂျိုပေါက်နေသေးတယ်။ မခြောက်ပါနဲ့ပန်ပန်ရယ် ... ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ .. :)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်္ဂလာ ၂၀၁၀ သာဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေ ... ။
အတ္တတွေမြေချခင်း ထုတ်ချင်းပေါက် ရင်ဘတ်တွေ ဖွင့်ထားလိုက်ကြမယ်”
a ghost with two angles?
နောက်နှစ်ဆိုတာကတော့ အမြဲတန်းရှိနေမှာပါ။ သူများတွေပြောသလိုပဲ ဟက်ပီးနယူးယီးယားပေါ့။ ၂၀၁၀မှာ အမတ်ဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါဦး။း)
ဖတ်တယ် ဖတ်သွားတယ် ဒေါ်ပန်
အချိန်ဆိုတာကြီးကို ဘယ်သူမှ တားလို့မှ မရတာ...
နှစ်ထောင့် တဆယ်... နှစ်ထောင့် ဆယ့်တစ်...
ပြီးရင် နှစ်ထောင့်ဆယ့်နှစ်... ... ဆယ့်သုံး... ဆယ့်လေး... ဆယ့်ငါး... ... ဆယ့်ခြောက်...
၂ဝ၁ဝ နှစ်ဦး ဇန်နဝါရီမှာပဲ နေလကြတ်မယ်၊ နေနဲ့လကြတ်တဲ့အပြင် အင်္ဂါဂြိုဟ်က နောက်ပြန်သွားမယ်၊ ကမ္ဘာနဲ့ တစ်တန်းတည်း ကျမယ်၊ ကြာသပတေးက လျင်မြန်တဲ့ အသွားနှုန်းနဲ့ ပြေးမယ်။ ... ကဲ လာထား..၂ဝ၁ဝ။